Indlu yaseNong Bua Lamphu embindini weNong Bua Lamphu
Tambon Lam Phu, Chang Wat Nong Bua Lam Phu, Thailand
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguApittra
Kukho indawo yokupaka iimoto ezi-2 kunye noomatshini bokuhlamba abasetyenziswa ngemali. unayo iCCTV Kukho zonke izixhobo zombane. isifudumezi samanzi Iayini enebhodi yoku-ayina Amanzi ashushu asimahla kunye neti kunye nekofu. Kwaye okona kubaluleke kakhulu, iiTV ezihlakaniphile ziqhagamshela kwi-Wi-Fi ukubukela iYouTube kunye neNetflix.
Molweni igama lam ndingu Eyes ndingumntu othanda ukuhamba kakhulu ndinethuba lokukhenketha ndihlale kumazwe amaninzi ngokubhukisha indawo yokuhlala nge agoda app. Kwada kwayimini enye, ndacinga ukuba sifanele sizame ukuvula indlu ukuze wonke umntu azame ukuhlala kunye. Amehlo acinga ukuba le ndlu ifanele wonke umntu ofuna indawo yokuhlala. oko kuvakala ngathi likhaya
Iziko leNong Bua Lamphu lisondele kwipaki yoluntu yephondo. Rhoqo ngoMvulo kukho isitalato esihambayo.
Zininzi izitayile zeendawo zokutyela ecaleni kweNong Nong. Ekubeni indlu isecaleni kwemarike yephondo, kukho iimveliso zasekhaya. iimfuno ezithengiswayo Kukho iibrendi ezininzi ezinkulu kufutshane ne-7-Eleven 200 yeemitha
Kufuphi neMakro 500 yeemitha, kufutshane neLotus 800 yeemitha
Umbuki zindwendwe ngu- Apittra